Akụkọ - Hebei Tomato 2019 otu ọrụ ụlọ
Hebei Tomato 2019 ihe owuwu ụlọ
Hebei Tomato haziri ọrụ ụlọ kachasị ukwuu nke afọ site na August 9 ruo 13, 2019.
Iji mee ka oge ọrụ ndị ọrụ baa ọgaranya, belata nrụgide ọrụ, kwalite nkwukọrịta na nkwukọrịta n'etiti ndị ọrụ, mee ka njikọta otu na ikike dị iche iche sie ike, ma hazie ọrụ ụlọ otu echefughi echefu na Hebei Tomato.
N’ụbọchị mbụ, ụgbọ elu ahụ lara oge n’ihi ihu igwe. Anyị mechara gaa nke ọma.
N'ụbọchị nke abụọ, anyị banyere ụgbọala n'okporo ụzọ gafere site na ala ahịhịa Hulunbeier, ọ dịghị ala mmadụ ọ bụla, rutere n'ugwu na-enye iwu nke Osimiri Mozhgrad, wee detụ oriri "Asatọ nke Otu" maka Banquet na Asatọ Fortunes. N'ehihie, agara m Erguna National Wetland, gafere Black Island Island, ọhịa ọhịa boar, ọhịa eucalyptus, agwaetiti nnụnụ, Kang Street, oke mmiri ifuru mmiri na ebe ndị ọzọ mara mma. Osimiri ahụ doro anya na-aga nwayọọ, mmiri na-agba agba gburugburu ala ahịhịa ndụ na ala. Ohia bu ohia na ahihia. Abia na Genhe na mgbede ma detuo ndi okacha amara nke obodo. Mgbe ị risịrị nri zuru oke, nọrọ n'ụlọ a na-eche ogologo oge.
N'ụbọchị nke atọ, anyị gara na nke mbụ Lulu Guya Reindeer Park, nke a na-akpọ "agbụrụ ikpeazụ ịchụ nta" na China. Ọ bụ naanị obodo dị na China na-ebulite anụ ọhịa. Ọ na-abịarute Sahuan Ranch n’ehihie, na-agagharị n’ọhịa birch, ma na-abanye na Montenegro na mgbede iji nweta ịnya ịnyịnya. Ihe ọchị, oriri na ọ eveningụ eveningụ mgbede, nwee obi ụtọ atụrụ niile a roara n'ọkụ, na-ebi na yurt, na-ahụ ihe omume ntụrụndụ na ụdị Mongolian.
N’ụbọchị nke anọ, anyị rutere n’okporo ụzọ dị n’agbata Sino na Russia, gafere Osimiri Erguna nke na-acha anụnụ anụnụ. Ebe mara mma nke dị n'okporo ụzọ mere ka nrụgide nke ndị ọrụ belata. Nnukwu ala ahịhịa dị iche iche sara mbara obi ma mee ka anyị dịrị n'otu. Na mgbede Na Manzhouli, nwee ọ nightụ mara mma nke abalị.
N'ụbọchị nke ise, ọ gara asọmpi egwuregwu ịnyịnya na agbụrụ Mongolian nke Balhu, wee mechie mgbede na mgbede.
Site na ọrụ ụlọ a, mmekọrịta ndị ọrụ na ịdị ike nke ọgụ abụrụla nke miri emi, na nkwukọrịta tacit n'etiti ha abụrụla nke ọma. Enweela nghọta dị iche iche, mmetụta ahụ abịaruwo nso, ma onye ọ bụla emikpuwo na steeti ka mma na ịnụ ọkụ n'obi ka elu. N'ime ọrụ n'ọdịnihu, anyị emeela ka obi sie anyị ike na mkpebi siri ike anyị iwusi Hebei Temet ike.
Post oge: Mee-08-2020